လူသားဘုရား ၏သေခြင်း The Death of the God-Man
Lesson 3၊ အဓိကကျမ်းပုဒ် ။ ။ ဟေဗြဲ ၉း၂၆ (ခ)
ဖတ်ရန်ကျမ်းစာ ။ ။ လုကာအခန်းကြီး (၂၃)၊ ယောဟန် အခန်းကြီး (၁)
ဘုရားသခင်သည် လူသားကို ဖန်ဆင်းခဲ့သောနေ့မှစ၍ လူသားကို အစဉ်အမြဲ ချစ်ခဲ့ပြီး ကောင်းချီး ပေးလိုခဲ့သည်။ သို့သော် လူ၏ပုန်ကန်မှုနှင့်အပြစ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ပိတ်ဆို့စေသည့် အတားအဆီးကြီးတစ်ခုပမာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယက ဤသို့ရေးခဲ့သည်။ “သင်တို့ ဒုစရိုက်သည် သင်တို့ကို ဘုရားသခင်နှင့်ကွာစေပြီ။” (ဟေ ၅၉း၂)
ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးပေးမှုကို ပိတ်ဆို့တားဆီးထားသည့် ဤကြီးစွာသောအတားအဆီးကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သူမှာ ဘုရားသခင်၏သားတော် ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် သူသည် ဤအတားအဆီးကြီးကို ဖယ်ရှားရန် ကြွလာခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “သူသည် ဤလောက၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားမည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်တော်” ဟူ၍ဆိုခဲ့သည်။(ယော ၁း၂၉)
ကားတိုင်၌ ခရစ်တော်သေခြင်း၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ (၂)ခုရှိသည်။ အသွင်လက္ခဏာတခုသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သက်ဆိုင်၍ အခြားတခုသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်နွယ် သက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ခရစ်တော်သေခြင်း၏ အသွင်လက္ခဏာကို “ကိုယ်စားခံခြင်း” ဟူ၍ ခေါ်သည်။ ဤအရာက ဘာကို ရိုးရှင်းစွာဆိုလိုသလဲဆိုရင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားခံခဲ့သူဖြစ်သည် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာကိုယူ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် အသေခံခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်ကို သူ့အပေါ်မှာတင်တော်မူ၏” ဟုဆိုသည်။ (ဟေ ၅၃း၆)
ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ခရစ်တော်သေခြင်း၏ အသွင်လက္ခဏာသည် သာ၍အရေးကြီးသည်။ ထိုအသွင် လက္ခဏာကို “အမျက်ပြေခြင်း” ဟုခေါ်သည်။ အမျက်ပြေခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ပေါ်၌ထားရှိသည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မှန်သောအမျက်တော်ကို လုံးဝပြေစေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းသည် အပြစ်နှင့်အမြဲဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်။ ကားတိုင်၌ ခရစ်တော်သည် အပြစ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းကို ထမ်းထားခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “ထိုသခင်သည် ငါတို့၏ အပြစ်သာမက လောကီသားအပေါင်းတို့၏ အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်တော်မူ၏။” ဟုဆိုသည်။ (၁ယော ၂း၂)
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာကြောင့် ဒီအတိုင်းခွင့်မလွှတ်ပေးနိုင်သနည်း။
လူအများစုသည် ယေရှုကားတိုင်ထက်၌ ဘာကြောင့်အသေခံခဲ့သည်ကို နားမလည်နိုင်ပေ။ “ဘုရားသခင်က ငါတို့ကို ဘာကြောင့် ဒီအတိုင်း ခွင့်မလွတ်ပေးနိုင်သနည်း။” “ဘာကြောင့် ခရစ်တော်က အသေခံရမည်နည်း” ဟု စသည် ဖြင့် မေးလေ့ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်၌ အမှုကိစ္စတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် သူ့နည်းသူ့ဟန်နှင့်ရှိပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သူ့နည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ကျမ်းစာက “ထာဝရဘုရား၏ လမ်းခရီးတော်ရှိသမျှတို့သည် ဖြောင့်မတ်၍ ခပ်သိမ်းသော အမှုတော်တို့သည် သန့်ရှင်းကြပါ၏။” ဟုဆို သည်။ (ဆာ ၁၄၅း၁၇)
“ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်မည့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်သည် အခက်ခဲဆုံးပြဿနာတခုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ ပေမည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ပြီး ကယ်တင်လိုသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိုသို့ ကယ်တင်ရာတွင်၊ မည်သည့်လူ၊ ကောင်းကင်တမန်၊ နတ်ဆိုးနှင့် စာတန်ကိုယ်တိုင် မဝေဖန်နိုင်သည့် နည်းလမ်းမျိုးကိုသုံး၍ ကယ်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူကိုယ်တိုင် လုံးဝဥဿုံ ကျေနပ်နှစ်သက်သော နည်းလမ်း မျိုးကိုသုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာက မြို့ကြီးတမြို့၌၊ မြို့ရှိလူများ၏ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရသော တရားသူကြီး တဦးရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးဖြစ်သောကြောင့် လူများကသူ့ကို ချစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် တရားမျှတစွာ ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပြီး၊ သူ့ကိုလာဘ်ထိုး၍မရသလို မှားသောအရာကိုလုပ်ရန်လည်း သွေးဆောင်၍မရပေ။ သူသည် သနားကြင်နာ၍ ခွင့်လွှတ်တတ်သောကြောင့်လည်း လူများက သူ့ကိုချစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူကလည်း လူများကို ချစ်သည်။ တနေ့တွင်၊ လူတဦးအား ပေါင်မုန့်တလုံးကို ခိုးမှုဖြင့် တရားရုံးအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်။ တရားသူကြီးက “သင့်မှာအပြစ်ရှိသလား”ဟု မေးသောအခါ ထိုလူက “ဟုတ်ကဲ့၊ တရားသူကြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် အလွန်ဗိုက်ဆာနေခဲ့ပြီး ပိုက်ဆံလည်းမရှိသဖြင့် ပေါင်မုန့်ကို ခိုးမိခဲ့ပါသည်”ဟု ပြန်ဖြေသည်။
ထိုအခါ တရားသူကြီးက “ငါသည် သင့်ကိုသနားကြင်နာသော်လည်း သင်သည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီ။ ခိုးမှု အတွက် ပေးရမည့်ငွေဒဏ်ရှိသည်။ သင်သည် ထိုငွေဒဏ်ကိုမပေးပါက ထောင်ကျခံရမည်” ဟုပြောလိုက်သည်။
“ကျွန်ုပ်၌ ငွေမရှိပါ”ဟု ထိုလူအိုကြီးက ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
တရားသူကြီးသည် သနားကြင်နာစွာဖြင့် ထိုလူကိုငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူသည် အံ့ဖွယ်ကောင်းသော အမှုတခုကို ပြုလိုက်သည်။ သူဝတ်ထားသော တရားသူကြီးဝတ်ရုံကိုချွတ်၍ ထိုလူ ရပ်နေသောနေရာသို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။ သူ့လက်ကို ထိုလူအို၏ပခုံးပေါ်တင်၍ “သင့်ငွေဒဏ်ကို သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်ပေးချေမည်” ဟူ၍ ပြောလိုက်သည်။
တရားသူကြီးသည် ထိုလူ၏ဒဏ်ငွေကိုအပြည့်ပေးချေ၍ ထိုလူကိုငွေအချို့လည်းပေးလိုက်သည်။ တရားသူကြီးကို မဖြောင့်မှန်ဟု မည်သူ့ကမှ မစွပ်စွဲနိုင်ပါ။ သူသည်တရားဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ တချိန်တည်း၌ပင် ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် သနားကြင်နာမှုကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဥပဒေကိုချိုးဖောက်၍ ငွေဒဏ်မပေးချေနိုင်သော ထိုလူနှင့်တူသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်၍၊ ကျော်ကြည့်လိုက်၍ မရပေ။ ထိုသို့ လုပ်ပါက မဖြောင့်မှန်ရာကျမည်။ သို့သော် အမှန်ပင် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်၍ ကယ်တင်လိုသည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရှိသော ဖြေရှင်းရမည့် “ပြဿနာ” တွင် အချက်(၄)ချက်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိနိုင်သည်။
၂။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်ရမည်။
၃။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်၍ ကယ်တင်လိုသည်။
၄။ ဘုရားသခင်သည် မဖြောင့်မှန်စွာ လုပ်၍မရပါ။
ဘုရားသခင်သည် ဤ “ပြဿနာ” ကို မည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့သနည်း?
ဘုရားသခင်သည် သူ့ထံမှထွက်ပေါ်လာသော တဦးတည်းသောသူအားဖြင့် “ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ” ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါ့တို့အတွက် ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ် သော သူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း။” ဟု ဆိုသည်။ (၂ကော ၅း၂၁)
ဘုရားသခင်သည် သူ့လူများကို သူ့သားတော်၏သေခြင်းအကြောင်းကို များစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်စေလိုသည်။ ခရစ်တော်၏ကားတိုင်၌သေခြင်းသည်လုံးဝထူးခြားသောအခြေအနေတရပ်ဖြစ်သည်။ သူသည် လူ-ဘုရား ဖြစ်ပြီး အသက် ရှင်ခဲ့ပြီးသောသူရှိသမျှတွင် အနှိုင်းမဲ့ ကောင်းမွန်ဖြောင့်မတ်သူတဦးဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ထင်ရှားစေခဲ့ပြီး သူ့ဘ၀တလျှောက်လုံးတွင် အပြစ်တခုမျှ မကျူးလွန်ခဲ့ပေ။
ဘုရားသခင်ကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စေသော ဤလူသားပင်လျှင် ရောမတို့၏ ကားတိုင်ထက်၌ ရာဇ၀တ်သား တဦး၏ သေခြင်းမျိုးဖြင့်သေခဲ့ရသည်။ သူသည် သူ၏မိတ်ဆွေများ၊ တပည့်တော်များနှင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်၏ စွန့်ပစ် ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည် ခရစ်တော်ပေါ်၌ ချပုံထားခြင်းခံရသောအခါ အပြစ်ပေါ်တွင်ထားရှိသော ဘုရားသခင် ၏ အမျက်တော်သည် သူ့အပေါ်သို့ ဒလဟောစီးဆင်းကျရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် ခရစ်တော် အပေါ်သို့ ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးအရ ကျရောက်ခြင်းမဟုတ်သည်ကို နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကားတိုင်ထက်၌ သူသည် ချိတ်ဆွဲ ထားခြင်းကို ခံရသောအခါ သူ့ခမည်းတော်အတွက် ပို၍တန်ဖိုးရှိသူတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် သူ့ဖခင်၏ အလိုတော်ကို နာခံခြင်းရှိစွာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် အပြစ်သားအပေါ်တွင် တည်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သား များကိုချစ်သည်။ အလွန်ချစ်သဖြင့် သူ၏တဦးတည်းသောသားတော်ကိုပင် သူတို့အတွက် အသေခံစေခဲ့သည်။ “ဘုရား သခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။”
ဤသို့ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်က မည်သူ့အပေါ်တွင်တည်နေသနည်း.. “အပြစ်” ပေါ်တွင် တည်နေ ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကိုယူသည်ဖြစ်၍ ထိုနေရာနှင့်ပတ်သက်သမျှ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောအမျက်တော်သည် အပြစ်အပေါ်သို့ လုံးဝဥဿုံ စီးဆင်း ကျရောက်လာသည်။
ကားတိုင်ထက်၌ တင်၍သတ်ခြင်းသည် ရာဇ၀တ်သားတယောက်အတွက် ရှက်ကြောက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့် နာကျင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဤမျှပြင်းထန်ရက်စက်သောသေခြင်းသည် သာမန်ရာဇ၀တ်သားများ အတွက်မဟုတ်ဘဲ အဆိုးရွားဆုံးရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်ထားသော ရာဇ၀တ်သားများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ သားတော်ကို ဤကဲ့သို့ ရှက်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသော သေခြင်းမျိုးဖြင့် သေစေခဲ့သည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်သည်ထက် သူ၏နှလုံးသားခံစားမှုနှင့် အတွင်းစိတ်ဝေဒနာများက ခရစ်တော်ကိုအကြီးမားဆုံး နာကျင်ခံစားရစေသည်။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောသားတော်ဖြစ်၍ အပြစ်နှင့်လုံးဝမဆက်ဆံဘူးသူသည် ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် “အပြစ်တုံး” ကြီး ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်ကြောင့် ခမည်းတော်နှင့်ကွဲကွာခြင်းကို ခံရချိန်တွင် ခရစ်တော်၏ နှလုံးသားအတွင်း၌ မည်မျှခံစားကြေကွဲနေမည်ကို မည်သူမျှ ကြံစည်စဉ်းစား၍ နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် နာကျင်စွာဖြင့် “အကျွန်ုပ် ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း” ဟု အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ (မသဲ ၂၇း၄၆)
ယေရှုသည် မနက်ကိုးနာရီခန့်တွင် ကားတိုင်၌တင်ခြင်းကိုခံရသည်။ နေ့လည် ၃ နာရီမှ သေဆုံးခဲ့သည်။ နေမွန်းတည့်အချိန်မှ ၃ နာရီတိုင်အောင် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ မျက်နှာပြင်ကို အမှောင်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ကြီးစွာသော အသံဖြင့် “အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်၏၀ိညာဉ်ကို ကိုယ်တော်လက်၌ အကျွန်ုပ် အပ်နှံပါ၏” ဟူ၍ အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူ-ဘုရားသည် သေဆုံးခဲ့သည်။
ခရစ်တော်၏သေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကိုယူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် အဖိုးအခကို အပြည့်အ၀ပေးချေခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ့သားတော်အား ယုံကြည်သူတို့၏အပြစ်များကို ဖြောင့်မတ်စွာခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်၍၊ ကျော်၍မကြည့်သွားပေ။ သူသည် အပြစ်သားတို့ကို ဖြောင့်မတ်စွာ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်သည့်အကြောင်းမှာ ထိုသူများအတွက် သွန်းခဲ့သော သူ့သားတော်၏ အသွေးတော်ကို မြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားကို မမြင်ချင်ယောင်မဆောင်ပါ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ်တွင် မှီတွယ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖြောင့်မတ်စွာခွင့်လွှတ်သည်။ မည်သည့်လူ၊ နတ်ဆိုး၊ ကောင်းကင်တမန်နှင့် စာတန်မာနတ်ကိုယ်တိုင်သော်မှ ဘုရားသခင်ကို မဖြောင့်မှန်ဟု မစွပ်စွဲနိုင်ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သူကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့သော ပူဇော်ရာယဇ်ကောင်ကို အထူး ကျေနပ်နှစ်သက်ခဲ့သည်။
ခရစ်တော်၏သေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ဖော်ထုတ်ပြသသည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကိုချစ်သည်။ ကျမ်းစာက ကိုယ်တော်သည် “မည်သူကိုမျှ ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်စေလိုပေ။” ဟူ၍ပြောထားသည်။ (၂ပေ ၃း၉) ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် သူ၏သားတော်ကို အသေခံစေခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်ထားရှိသော သူ၏ကြီးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ သည်။ ကျမ်းစာက “ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်သည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏” (ရော ၅း၈)
ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်တော်၌ သေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် ထာဝရကာလထားရှိသော ဘုရားသခင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၏ကြီးမြတ်သောသက်သေဖြစ်သည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသံသယရှိသူများအား ဘုရားသခင်သည် ကားတိုင်တော်ကို လက်ညှိုးထိုးပြ၍ ဤသို့ပြောလျက်ရှိသည်။ “ငါသည်သင့်ကို ထာဝရကာလကြာရှည်သော ချစ်ခြင်း မေတ္တာမျိုးဖြင့် ချစ်ခဲ့ပြီ။ သင့်အတွက်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ငါ့မှာရှိတဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကို စွန့်ခြင်းအားဖြင့် ပြသခဲ့ပြီ။ ငါ၏ချစ်လှစွာသော သားတော်ကိုပင် သင့်ကိုယ်စားအသေခံစေခဲ့ပြီ။ သင်သည်ကားတိုင်တော်ကို ကြည့်စဉ် ငါ့ချစ်စွာသော သားတော်သည် သင့်အပြစ်များအတွက် သေလုမျောပါး ဒုက္ခဝေဒနာများခံစားနေရသည်ကို သင်တွေ့သောအခါ ငါ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို သင်သံသယရှိဦးမည်လား? ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများကို သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်အား သိစေလိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးများထဲသို့ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို သွန်းလောင်းရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “ငါတို့အားပေးတော်မူသော သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကို ငါတို့စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ သွန်းလောင်းတော်မူ၏”ဟု ဆိုသည်။ ရော ၅း၅
ခရစ်တော်၏သေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသည်။
တစုံတဦးသည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို မည်သို့ ထင်ရှားစေမည်နည်း။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် အပါအ၀င် မည်သူကမှ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို မည်သည့်အရာမျှထပ်ပေါင်းထည့်၍ မရပါ။ ထိုသို့ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို မည်သို့ထင်ရှားစေမည်နည်း။ မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်မည့် တခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ “ကိုယ်တော်သည် မည်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ပြသခြင်း” ပင်ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်က ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်သည်ကို ဖော်ထုတ် ပြသခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့သည်။ အပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သည် အပြစ်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ မျှတ၍ဖြောင့်မှန်သောစီရင်ခြင်းကို ခံယူခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့သည်။
ခရစ်တော်၏သေခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဤအချက် (၂)ချက်ကိုသိနိုင်သည်။
(၁) ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သော ဘုရားဖြစ်သည်။
(၂) ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်သောဘုရားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် ကျေးဇူးတော်နှင့် ကြွယ်ဝသောဘုန်းတော်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကားတိုင် ထက်၌ အသေခံခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ပြည့်စုံစွာ ကာလအင်္သချေ ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ စကြာဝဠာရှိ အသိဥာဏ်ရှိသောသတ္တ၀ါတိုင်း ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်၍ အပြစ်ကိုကျော်၍မကြည့်သောသူဖြစ်ပြီး အပြစ်ရှိ သော လူသားများကို အလွန်ချစ်သဖြင့် သူတို့အတွက် အသေခံရန် သားတော်ကို စေလွှတ်သူဖြစ်ကြောင်း သိပေလိမ့်မည်။
ခရစ်တော်၏သေခြင်းသည် အပြစ်အတားအဆီးကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
လူများကိုပေးမည့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်ကို ပိတ်ဆို့ထားသည့် ကြီးစွာသော အပြစ်ဆိုသည့် အတားအဆီးကြီးသည်ဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ဤအတားအဆီးကြီးကိုကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှားရန် ဘုရားသားတော်သည် လူသားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “ယခုမူကား၊ ဤကပ်ကာလအဆုံး၌ တခါ တည်း ကိုယ်ကိုပူဇော်သောအားဖြင့် အပြစ်များကို သုတ်သင်ဖယ်ရှင်းခြင်းငှာ ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏”ဟုဆိုသည်။ ဟေဗြဲ ၉း၂၆
ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း၏ အပြစ်များကို အဖိုးအခ မပေးရဘဲ အပြည့်အ၀ ခွင့်လွှတ်ပေးရန်အတွက် လူတို့အားကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားကို ပြောနေသည်မှာ “ငါ့ချစ်စွာသောသားတော်ကို သင့်ကိုယ်စား အသေခံစေခြင်းအားဖြင့် သင့်အတွက် ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခဲ့ပြီ။ ငါတို့ကြား မှ အပြစ်ဆိုသည့် အတားအဆီးကြီးကို သူဖယ်ရှားခဲ့ပြီ။ သင်သည် ငါ့သားတော်နှင့် သင့်အတွက်သွန်းလောင်းသည့် သူ့ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သင့်အပြစ်အားလုံးကို ငါခွင့်လွှတ်မည်။” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက “ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် နာမတော်အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကိုခံရကြလတံ္တ့ဟူ၍ ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည် ထိုသခင်၏ သက်သေခံဖြစ်ကြသည်” ဟုဆိုသည်။ (တမန် ၁၀း၄၃)
ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ပေးသောအရာအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမခံရပဲ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခရစ်တော် လုပ်ပေးခဲ့သောအရာ အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။
ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည် အပြစ်ဆိုသည့် ပြသနာကြီးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လူ့လောကသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကို လုပ်မိကြသော်လည်း အပြစ်ကို မစွန့်ပစ် မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ သားတော် က ဤအရာကိုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ သူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဤအရာကို လုပ်ဆောင် ရန် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက “သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ပူဇော်ရာယဇ်ကောင်” ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည်။
ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အမှု၏တန်ဖိုးအားလုံးသည် ခရစ်တော်၌သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သူ လုပ်ဆောင်မှု၏အကျိုးကို ခံစားလိုပါက သင်၏အပြစ်များအတွက် သူအသေခံခဲ့သည်ကို ယုံကြည်လျက် သူထံသို့ ချဉ်းကပ် တိုးဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသော ဥပမာတခုသည် ဤအခြင်းအရာကိုနားလည်နိုင်ရန် ကူညီပေလိမ့်မည်။ ဆေးကျောင်း သားတစ်ဦးသည် မရေတွက်နိုင်သော နာရီပေါင်းများစွာကို သူ့စာအုပ်များအား ဖတ်ခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးစေသည် ဆိုပါစို့။ သူသည် လက်တွေ့ထရိန်နင်ဆင်းခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဆေးရုံများ၌ အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏အချိန်များစွာကို ကုန်ဆုံးစေကာ သူ့အနာဂတ်တွင် ဆရာဝန်အလုပ်အတွက် ပြင်ဆင်လျက် ရှိသည်။
သူ၏ ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံး ပြီးစီးသွားသောအခါ သူသည် လက်မှတ်ရဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်လာပေမည်။ ဤအလုပ်၏တန်ဖိုးအားလုံးသည် ဤအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် သူ့အတွင်း၌သာတည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ကြာ ရှည်စွာ သင်ယူလေ့လာခဲ့မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများ၏အကျိုးကို ခံစားလိုပါက သင်သည်ဤအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့သော သူ့ထံသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်၏တန်ဖိုး အားလုံးသည် ဤအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့သော ဘုန်းတော်ထင်ရှားသော ခရစ်တော်အတွင်း၌သာ ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်၏အကျိုးကို ခံစားလိုပါက သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သူ့အားယုံကြည်လျက် သူ့ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဆုတောင်းချက်မျိုးဖြင့် သင် ခရစ်တော်ထံ တိုးဝင်ရသည်။ “သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သားတဦးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်အပြစ်များအတွက် အလွန်ပင်နောင်တရပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက် အဖိုးထိုက်တန်လှသော ကိုယ်တော်၏ အသွေးတော်ကို သွန်းခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားအတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍၊ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော့်ကို ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံပါသည်။”
ကားတိုင်ပေါ်၌ သူ၏အသေခံခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်လူကြားရှိ ကြီးစွာသော အတား အဆီး ကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ အပြစ်သားများကို ဖြောင့်မှန်စွာ အပြစ်လွှတ်လျက်ရှိသည်။
ဘုရားသခင်၏ ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် သားတော် ယေရှုခရစ်တော် ကားတိုင်၌ သေခြင်းဖြစ်သည်။ ကားတိုင်တော်၌ သေခြင်းအားဖြင့် အပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ကို ထင်ရှားစေသည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေနပ်နှစ်သက် ပါရဲ့လား? ဟုတ်ကဲ့။ ကျေနပ်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ခရစ်တော်၏ကားတိုင်တော်၌ ပြီးပြည့်စုံစွာဖေါ်ပြထားပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း ပြီးပြည့်စုံစွာ ကျေနပ်နှစ်သက်စေခဲ့သည်။ ကားတိုင်တော်၌ ခရစ်တော်၏ သေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အကြီးမြတ်ဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့မှု (masterpiece) ဖြစ်ခြင်းမှာ ဤအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူများကို ဖြောင့်မတ်စွာ ကယ်တင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ယုံကြည်ချက် အပြည့်ရှိလျှက် ရဲဝံ့စွာ နေနိုင်လား၊ မနေနိုင်လား ဆိုသည် မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နားလည်လား၊ မနားလည်လား၊ အပေါ်တွင် များစွာ မူတည်လျက် ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏သားသမီးအများစုသည် ဤအချက်ကို နားမလည်ကြပေ။ ဘုရားသခင်က သူ့တို့ကို စင်ကြယ်စွာ အပြစ်လွှတ်ပေးသည်မှာ သူတို့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်၍ သူတို့ကို သနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် အမှန်ပင်အပြစ်သားများအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်၍ သူတို့အပေါ်၌လည်း သနားခြင်း ဂရုဏာ တော်ရှိသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ်တွင်သာ အခြေခံသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ငါသည် ခရစ်တော်၏ဧ၀ံဂေလိတရားကြောင့် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ၊ အကြောင်းမူ ကား ထိုတရားသည် ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်စေသော ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ အဘယ် သို့ဖြစ်သနည်း ဟူမူကား၊ ...ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ဧ၀ံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။” ဟုဆိုထားသည်။ (ရောမ ၁း၁၆-၁၇)
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်၏အဖိုးအခကို ပေးချေခဲ့သော သူ့သားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးခဲ့ သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်၏ အဖိုးအခကိုပေးခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် သူ့ထံလာသောသူများကို ခွင့်လွှတ်မည်မှာ သေချာပါသည်။ ထိုသို့ ခွင့်မလွှတ်ပေးပါက ဘုရားသခင်သည် မဖြောင့်မတ်ရာ ကျမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်သည် ဘယ်သောအခါမှ မဖြောင့်မမှန်စွာ လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ သို့သော် ထိုကျေးဇူး တော်သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံလာသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် “လမ်းကြောင်း” (Channel) တခုဖြစ်၏ဟုပြောနိုင်ပြီး ထို “လမ်းကြောင်း” ကိုဖြတ်၍ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိသည်။ ကျမ်းစာက “ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အပြစ်တရားသည် သေခြင်းအားဖြင့် အစိုးရသည်နည်းတူ၊ ငါတို့၏ သခင်ယေရှုခရစ် ပြုစုတော်မူ၍ ကျေးဇူးတရားသည် ထာဝရအသက်နှင့်ယှဉ်သော ဖြောင့်မတ်ရာသို့ သွင်းခြင်းအားဖြင့် အစိုးရလေအံ့သတည်း။” ဟုဆိုသည်။( ရော ၅း၂၁)
ဘုရားသခင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ယှဉ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်လွှတ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိလျှက် ရဲဝံ့စွာရပ်နေနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မိမိတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မိမိတို့မည်သို့မည်ပုံခံစားရသည်ကို မကြည့်မှတ်တော့ဘဲ ဘုရားသခင်၏ မပြောင်းလဲနိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာ မှီခိုသည်။ ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်သိသူ၊ မည်သူမဆို ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ရဲဝံ့ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုဖြောင့်မတ်စွာ အပြစ်လွှတ်ပေးကြောင်း သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁။ လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောနေ့မှစ၍ ဘုရားသခင်သည်လူသားကိုအမြဲတမ်း.....
(က) မုန်တီး၍ သူ၏အပြစ်များအတွက် သူ့ကိုဒဏ်ခတ်အပြစ်ပေးချင်ခဲ့သည်။
(ခ) ချစ်ပြီး ကောင်းချီးပေးလိုခဲ့သည်။
(က) လူသားကိုပေးမည့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပိတ်ဆို့စေသော အတားအဆီးကြီးတခုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
(ခ) လူနှင့်ဘုရားကြားတွင် မည်သည့်ပြသနာကိုမှ မဖြစ်စေခဲ့ပါ။
၃။ “အမျက်ပြေစေသည်” ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ....
(က) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွန်ချစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်သည်။
(ခ) ခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ပေါ်တွင်ထားရှိသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော အမျက်တော်ကို လုံးဝပြေစေခဲ့သည်။
၄။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်သာ ကားတိုင်၌အသေမခံခဲ့လျင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်လွှတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
(က) ဘုရားသခင်သည် လုံးဝဥဿုံဖြောင့်မတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(ခ) ဘုရားသခင်သည် နှစ်လိုဖွယ်သိပ်မကောင်း၍ သနားခြင်းဂရုဏာ သိပ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်
၅။ ခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ထက်သို့တက်သောအခါ၊ -- အပေါ်တွင်ထားရှိသော ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ပြေသွားသည်။
၆။ ကားတိုင်ပေါ်၌ ခရစ်တော်၏သေခြင်းသည် အောက်ပါအချက်ကို ထာဝရကာလကြာရှည်စွာနှင့် ကြီးမြတ်စွာ သက်သေ ပြလျက်ရှိသည်။
(က) ခရစ်တော်သည် သူယုံကြည်သောအရာအတွက် သူရဲကောင်းတဦးအနေဖြင့် အသေခံရန် အသင့်ရှိသည်ဆိုသော အချက်
(ခ) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် ကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ထားရှိသည်ဆိုသောအချက်။
၇။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို အောက်ပါအတိုင်း ထင်ရှားစေခဲ့သည်။
(က) ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ဘုန်းထင်ရှားစွာ ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းအားဖြင့်။
(ခ) သူအသက်တာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထပ်ပေါင်းဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်။
၈။ လူသားများကိုပေးမည့်ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီမင်္ဂလာတော်ကိုပိတ်ဆို့ထားသည့် အပြစ်ဆိုသော အတားအဆီးကြီးမှာ
(က) လူများသည် ဘုရားသားတော်ကို သတ်ခဲ့သောကြောင့် ပို၍ပင်ကြီးလာသည်။
(ခ) ခရစ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကို ပူဇော်စွန့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။
၉။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ....
(က) ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအရာများအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။
(ခ) ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ပေးသောအရာအားဖြင့်။
၁၀။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်သည် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်သည့်လူသားတိုင်းကို အဖိုးအခလုံးဝပေးစရာမလိုဘဲ လုံးဝ ဥဿုံအပြစ်လွှတ်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။
(က) ပညတ်တော် (၁၀)ပါး ကို ကျင့်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်သည့်သူများ။
(ခ) ခရစ်တော်ကို သူတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်သူများ။